ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 03/04/09
ကျနော် နှင့် အင်တာနက်
ဤ အကြောင်းအရာအား ရေးသား ခြင်သည်။
သို့သော် ဘာမှ မယ်မယ်ရရ ပြောပြဖို့ မရှိသလို ဖြစ်နေသည်။
အင်တာနက် အကြောင်းကို ပြောမည် ဆိုလျှင် ကွန်ပျူတာ ကစရ မည်။ ကွန်ပျူတာ အကြောင်း စရေးမယ် ကြံတော့လည်း လက်နှိပ်စက် ဆိုတာ လေးက ပေါ်လာပြန်သည်။ ကျနော် အင်တာနက် အသုံးပြု တတ်ရန် သတင်း အချက်လက် အင်ဖော်မေးရှင်းများ ရှာလိုက် မှတ်လိုက် ရတဲ့ နှစ်တွေ မနည်းပေ။ နေထိုင် ကျင်လည် ခဲ့သော ပတ်ဝန်းကျင်သည် သူလိုလို ငါလိုလို အောက်ခြေလူတန်းစား တွင်ဖြစ်သည်။ အထက်တန်း ကျောင်း တက်စဉ်က ကျောင်းတွင် ကွန်ပျူတာ အခန်းရှိသည်။ သို့သော် ပြတင်းမှန်မှ ချောင်းကြည့်ခဲ့ရသည်။
အကိုကြီး တစ်ယောက် လက်နှိပ်စက် ရိုက်ခြင်းအား ဘေးမှနေ စာခေါ်ပေးဖူးသည်။ ဤမှ ကျနော်သည် လက်နှိပ်စက် ဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ၊ မြန်မာစာ ရိုက်နည်းများ အကျွမ်းဝင်လာခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဖန် ကွန်ပျူတာသို့ စိတ် ၀င်စားမှု ပိုခဲ့ သည်။ ကွန်ပျူတာနှင့် ပတ်သက်သော သတင်း နည်းပညာများ များအား အသည်းသန် ရှာဖွေဖတ်ရှုခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာ (အခမဲ့) ပြင် သော မိတ်ထီလာမှ ကိုမော်ကြီး၏ ကျေးဇူးကား ကြီးလှသည်။ သူသည် မြန်မာစာ ဖြင့် ကျောင်းပြီး သော်လည်း အီလက်ထရောနစ် ပစ္စည်းများအား အလွန်ဝါသနာ ထုံသည်။ အားလပ် ချိန်များတွင် ကွန်ပျူတာ ပြင်သော ကိုမော်ကြီး အနားကပ်ခါ မေးခွန်းများ မေးခြင်း၊ တစ်စစီ ဖြုတ်ထား သော ကွန်ပျူ တာအပိုင်း အစများအား ကိုင်ကြည့်ခြင်း ဖြင့် လေ့လာရသည်။ ဒါကမော်နီတာ၊ ဒါကအောက်စက် စီပီယူ၊ ဒါကတော့ မီးပျက် တဲ့ အခါသုံးတဲ့ ယူပီအက်(စ်) ၊ ကွန်ပျူတာ ပစ္စည်းမှာ အပျော့စား၊ အမာစား နှစ်မျိုးရှိသည် စသည်ဖြင့် ရှင်းလင်းပြ တတ်သည်။ ကိုမော်ကြီးသည် စိတ်ရှည်သည်။ စေတနာထားသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ကတော့ သူ့အား အထင်မကြီး ကြပေ။ ပြင်သမျှ ပြန်ကောင်းလာတာ ခပ်ရှားရှားဖြစ်သည်။
ကွန်ပျူတာ စာရိုက်ရန် ကီးဘုတ် လက်ကွက် စာရွက်လေး ရတော့ ကျနော် အလွန်ပျော်သည်။ လက်နှိပ်စက်ဖြင့် သိပ်မကွာ၍ လေ့လာရတာ အခက်ခဲမရှိ။ တစ်နေ့ ကိုမော်ကြီး သည် အိုင်ဘီအမ် ပီသရီး တစ်ပတ်ရစ် ကွန်ပျူ တာလေးဝယ် သည်။ သူ ကွန်ပျူတာ ရိုက်နေသည်ကို ဘေးမှကြည့် ကာ လေ့လာသည်။ အခြေခံ အကြောင်း အရာ များ ရှင်းပြ သည်။ ရန်ကုန်မြို့ ပန်းဆိုးတန်း လမ်းရှိ ဖော်အဲဗား ကွန်ပျူတာ သင်တန်း ဖွင့်စက သင်တန်း တက်ဖူး သည်ဟုပြောပြသည်။ သင်ခန်း စာ စာအုပ်များငှားသည်။ ကွန်ပျူ တာ အခြေခံများ အတော်လေး ရလိုက် သည်။ ကွန်ပျူတာ ဖွင့်ပိတ်ခြင်း၊ ဖိုင် တစ်ခုဖွင့် သိမ်းခြင်း၊ နာမည်ပေးခြင်း၊ မြန်မာ နဲ့ အင်္ဂလိပ် တွဲရိုက်ခြင်း၊ စာမျက်နှာ ရွေးခြင်းနှင့် မာဂျင် ပေးခြင်း များ ရှင်းပြသည်။ ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်အား အစမ်း ရိုက်ကြည့် သောအခါ လက်နှိပ် စက် ရိုက်ဖူးသော ကျနော့် လက် သည် နုနုရွရွ ကီးဘုတ်နှင့် အထာမကျ။ နွေအခါ လယ်တော ခရောင်းလမ်းတွင် ထော်လာဂျီ မောင်းလာသော အသံဖြစ်နေသည်။
ပုဂံညောင်ဦးတွင် ကိုမော်ကြီးနှင့်တွဲဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကိုမော်ကြီးသည် အင်တာနက် သုံးသူ အဆင်သို့ ရောက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်သည် မည်သို့ အရေးပါကြောင်း ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် မည်သို့ အသုံးပြုကြောင်း ရှင်းပြသည်။ ကျနော်သည်လည်း မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ရိုက်နိုင်သည်။ ဇယားများ ဆွဲသော အိတ်ဇဲလ် အားစတင်နေပြီဖြစ်သည်။ ပါဝါပွိုင့် အား အခြေခံကာ အဒိုဗီ ဖိုတိုရှော့အား လက်တည့်စမ်းခြင် သောစိတ် ပင် ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ၀န်ကြီးချုပ် ဟောင်း တစ်ဦး၏သား ပိုင်သော ပုဂံ ဆိုက်ဘာ တက် အင်တာနက် ဆားဗစ် စတင်ကာ အိုင်ပီစတားများ ဖြန့်ဝေရောင်းချသော အချိန်ဖြစ်သည်။ မြန်မာ ပြည်တွင် အင်တာနက် အသုံး ပြုသူ နည်းပါးသေးသည်။ ကျနော်သည် ရသမျှ နည်းပညာ သတင်း အတိုအထွာများ ဖတ်ကာ အင်တာဆိုတာ ဘာကွလို့ ရမ်းသမ်းပြော တတ်နေပြီဖြစ်သည်။ ဂူဂဲ၊ ရဟူး နှင့် ဒေါ့ကွန်းတစ်ချို့အား အသေမှတ်ထားတတ်သည်။
သို့နှင့် ကိုမော်ကြီးနားကပ်ကာ အင်တာနက်သုံးနည်းအား လေ့လာရသည်။ သို့သော် ပေးမသုံး။ တစ်နေ့ သူ အပြင်ထွက်ခိုက် အင်တာနက်အား စမ်းဖွင့်ကြည့်သည်။ သူကြည့်နေကျ ကျနော် အလွတ်ရနေတဲ့ အ၀တ်ဗလာ ထိုင်းမော်ဒယ်မ လေးများ ဆိုဒ်တစ်ခု ကိုဖွင့်ကြည့်သည်။ ကလစ်ချက်တွေ များတော့ ပိတ်မနိုင်ဖြစ် လာသည်။ ကွန်ပျူတာ တစ်ခုခုဖြစ် သွားပြီ ထင်ကာ ကိုမော်ကြီးအား ခေါ်မေးရသည်။ သို့နှင့် အင်တာနက် ၀က်ဆိုဒ် အကြောင်း၊ အီးမေးအကြောင်း၊ ချက်တင် စကားပြောခြင်းအကြောင်းများ ရှင်းပြသည်။
ဂျာနယ်များမှ အင်တာနက် ကဖေး များ စတင်မိတ်ဆက် ရေးသားလာသောအခါ အင်တာနက်ကဖေး ဆိုတာ ဘာလည်း သိခြင်လာသည်။ ကော်ဖီဆိုင်တွင် အင်တာနက်ပြခြင်းလော။ ကော်ဖီသောက်ပြီး အင်တာနက်ကြည့် ရခြင်လော။ အင်တာနက်အား ကော်ဖီဟု တင်စားခြင်လော စသည်ဖြင့် စဉ်စားခန်းဖွင့်ဖူးသည်။
ညဆယ်နာရီခန့်တွင်ဖြစ်သည်။ ကိုမော်ကြီး တကုတ်ကုတ်နဲ့ ဘာတွေလုပ်နေလည်းမသိ ။ ဘေးနာကနေ အသံမပေးပဲ ကပ်ခါ ချောင်းကြည့်သည်။ သူမျက်နှာသည် ပြုံးရွှင်နေ သည်။ လက်မှလည်း အဆက်မပြတ် စာတွေရိုက်နေသည်။ ဟိတ်လူ ခင်ဗျား ဘာတွေလုပ်နေတာလည်း ဟု မေးသောခါ - ယခုအခေါ် ကြူကြူ လုပ်နေကြောင်း သေဘာပေါက်ခဲ့သည်။ ကိုမော်ကြီ၏ နစ်နိမ်းကား မိုက် ဖြစ်သည် တစ်ဖက်မှ မိန်းကလေး၏ အမည်မှာ လမင်းလေး ဖြစ်သည်။ သို့နှင့် ကျနော်သည် ကိုမော်ကြီးထံ ထဏခဏ ရောက်ဖြစ်လေသည်။
ကျနော် နားပူ နားစာ လုပ်လွန်း၍ ကိုမော်ကြီးမှ http://www.walla.com/ မှ ဖရီးမေး တစ်ခု လုပ်ပေးသည်။ ဤတွင် အင်တာနက်အား ကျနော် ပို၍ သဘော ပေါက်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်စာ၏ အရေးပါမှုအား နားလည် လာရသည်။ အီးမေး လိပ်စာတစ်ခုရှိလျှင် ဆိုဒ် အတော်များများ ၀င်၍ရသည်။ သူငယ်ချင်းနှင့် စာပေး စာယူလုပ်၍ရသည်။ ပထမဆုံး ကျနော် မန်ဘာဝင်ခဲ့သော ဆိုဒ်မှာ မြန်မာချက်နက် ဖြစ်သည်။ မြန်မာ ချက် တွင် အကန့်များခွဲထား သည် အားလုံး ၀င်ပြော၍ရသည်။ ပရိုက်ဗိတ် ပြော၍ ရသည်။ ချောင်းသာ၊ ငပလီ၊ စသည်ဖြင့် ချစ်သူများ စုံစည်းရာ နေရာလေးများမှတ်မိသည်။ ထိုအချိန်က ကျနော့် နှင့် စကားအများဆုံး ပြောဖြစ်သော အွန်လိုင်း သူငယ်ချင်းမှာ လသာမှ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ နောက်တစ်ယောက်မှာ လားရှိုးမှ အစ်မ တစ်ယောက်ဖြစ် သည်။ သူတို့ ဆီမှ အင်တာနက် ဝေါဟာရ နှင့် နည်းပညာများ သင်ယူခဲ့ဖူးသည်။
ထိုမှ ဤမှ ကျနော်သည် အင်တာနက် နှင့်ထိတွေ့မှု ဝေးကွာခဲ့ရပြန်သည်။ ၄င်းနောက် အင်တာနက်အား အဆက်ပြတ်သွားသလို နည်းပညာအားလည်း ပြတ်ကျန်ခဲ့လေသည်။ ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်သောအခါ အကို ၀မ်ကွဲ အကူ ညီဖြင့် ဂျီမေး အကောင့်တစ်ခုရသည်။ အင်တာနက် သုံးသည် ဟုဆိုသော်ညား ချက်တင်လုပ်ခြင်း ဘာဘာညာညာ ကြည့်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ရှေ့ဆက်၍ကား မတက်နိုင်ခဲချေ။
DatE Friday, April 03, 2009 LaveL personal0comments link this
အညာမြေကလူသားတစ်ဦး။ ဇာတိမြေ ကိုချစ်တယ်။ ကမ္ဘာမြေကို ချစ်တယ်။ စာရေး စာဖတ် ၀ါသနာပါတယ်။
ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်း ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ သွားမည်
Click on Photo - ဓာတ်ပုံပေါ် နှိပ်၍ ဖွင့်ပါ
kyaukpadaung (68) personal (32) s'pore and job (27) ကဗျာ စာစု (25) ကျောက်ပန်းတောင်း (20) မွေးရပ်မြေ (19) kpg (18) စပ်မိစပ်ရာ (14) PhoTooooooO (13) popa (10) oasis (9) စိတ်အဟာရ (8) ပုပ္ပါးတောင် (7) ဇာတိမြေ (6) ထူးခြားသတင်း (6) အညာ (6) Mount Popa (5) ကွန်ပျူတာ မြန်မာစာ (4) ကျေးဇူးစကား (4) ရေရှားမှု ပြသနာ (4) Education (3) ဘာကြောင့်လဲ (3) မီးတောင် (3) ဟာသ (3) ရေ (3) Myanmar (2) Pozzolan (2) ancient city (2) kyat mauk taung dam (2) video (2) ကပတ (2) ကျိုက်ထီးရိုးခရီးစဉ် (2) စကားဝါပန်း (2) ပိတောက်ပန်း (2) လာလည်သူများသို့ (2) သင်္ကြန် (2) အာဇာနည်နေ့ (2) ရေးချင်တာရေးသည် (2) ကြက်မောက်တောင် (2) Ayeyarwaddy (1) Bagan (1) Irrawaddy (1) NLD (1) Nathayauk (1) New year 2010 (1) Rules of Law (1) Theravada (1) jaggery (1) palm (1) safetyfirst (1) ငါ့သရောက် (1) ပုဂံ (1) ဖတ်ပါမှတ်ပါ (1) ဘလော့ဂ်ပေးတဲ့ဒဏ်ရာ (1) ဘလော့ဂ်၊ ဘလော်ဂါ (1) မတည်မြဲခြင်း (1) မုဒိတာ (1) မှတ်သားစရာ (1) မန္တလေး (1) လက်ပန်ပွင့် (1) လူချွန်လူကောင်း (1) သီတဂူဆရာတော် (1) အတွေး စိတ်ကူး မှတ်တမ်း (1) ဧရာဝတီ (1) ချော်ပြာ (1) ဂွေးချိုတောင်တန်း (1) ဆေးပေါ့လိပ် (1) ညောင်ဦး (1) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (1) နေပြည်တော် (1) မြင်းခြံ (1) မြစ် (1) မြန်မာ (1) မြန်မာစာ (1)
မြန်မာ အက္ခရာ စဉ်ကြမယ် ။
မြန်မာ အက္ခရာ စဉ်ကြမယ်... ဘာလိုလိုနဲ့ ကျနော်တယောက် ပို့စ်အသစ်မတင်ဖြစ်တာ လေးရက်လောက် ရှိသွားပါပြီ။ ကျနော့်ဆီကို လာလည်နေကြ သူငယ်ချင်းတွေလဲ ...
နေပြည်တော် သမ္မတရုံးက ခန်းညားလှတဲ့ ပုပ္ပါးတောင် ။ ဓာတ်ပုံထဲမှာသာ မက အပြင်မှာလဲ ပုပ္ပါးတောင် ကို စောင့်ရှောက်တဲ့ သမ္မတမင်းများ မျှော်လင့်မိပါ...
The Best View Of Kyaukpadaung Town
The Best View Of Kyaukpadaung Town that I found in Google Map. ကျောက်ပန်းတောင်း မြို့ရဲ့ အလှပဆုံး မြင်ကွင်းကို ကျွန်တော် တွေ့ရှိခဲ့တယ် ။ ...
အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ..... ကျွန်တော်တို့ လက်ပန်ကျင်း (တောင်ရွာ၊ အလယ်ရွာ၊ ညောင်ရွာ၊ သီးကုန်း) အခြေခံပညာ အလယ်တန်းကျောင်း သို့ ရန်ကုန်မြို့ရော...
ထန်းပင်ထန်းတောတွေနဲ့ လွမ်းမောဖွယ်မြေ (၂)
ငယ်စဉ်က ကျွန်တော် ထန်းပင် တက်ဖူးပါတယ်။ ဆော့တာလဲ မြောက်ရှုံးလောက်တယ်။ ပထမဆုံး ထန်းပင်တက်တာက ထန်းရေချို ခိုးသောက်တာ။ ထန်းပင်မှာ ရင်းထောင် ရ...
ကိုညီလင်းဆက် သို့ ပေးစာ။
ကိုညီလင်းဆက်ရေ… အင်တာနက်မှာ စိတ်တိုင်းမကျတာလေးတခုကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ အကိုသိပြီးသား ဖြစ်မယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်။ အကို နဲ့ ကိုစိုးမင်း မြန်မာစာ အက...
ကျောက်ပန်းတောင်း KyaukpadaunG BloglisT
မအားတဲ့ကြားက ချက်စားဖြစ်တဲ့ ဟင်းခွက်လေးများ
ကျောက်ပန်းတောင်းအသင်း | မွေးရပ်ဇာတိမြေသို့အမှတ်တရ.....